प्रदेश २ मा मन्त्री हेरफेर भएपनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » प्रदेश २ मा मन्त्री हेरफेर भएपनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन
प्रदेश २ मा मन्त्री हेरफेर भएपनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन
कार्यकारिणी सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएको झण्डै आठ महिना भइसकेको छ तर अहिलेसम्म समायोजनको काम अगाडि बढेको छैन । केन्द्रमा कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ तर अन्य कुनै कमिटीको समायोजन प्रकृया अगाडि बढाएको पनि छैन । मंसिर १५ गतेभित्र सम्पूर्ण समायोजन प्रकृया सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ तर अझै प्रकृया शुरु भएको छैन । प्रदेश २ को सरकारलाई लिएर जसपा नेपालमा विवाद चलिरहेको छ । त्यहाँका सांसदहरुले सरकार परिवर्तनको माग गर्नुभएको छ भने केन्द्रले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिएको छैन । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य दानबहादुर चौधरीसँग सहारा टाइम्सले गरेको काुराकानीको सम्पादीत अंशः
विभिन्न दल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको झण्डै आठ महिना हुन लागेको छ, त्यसको समायोजन प्रकृया कहाँ पुगेको छ ?
–समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । त्यो एकदम खुशीको कुराको हो । जनताको माग र चाहना अनुसार यी दुवै दलको बीचमा एकीकरण भएको हो । मुख्य कुरा एकीकरण थियो, त्यो भयो अरु तपसिलका कुरा हुन् त्यो विस्तारै हुँदै जान्छ । समायोजनका काम पनि अगाडि बढेको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यसम्म टुग्यांउने काम भएको छ । प्रदेशमा पनि समायोजनको काम हुन्थ्यो तर शुरुमा कोरोनाले अलिअलि समस्या पार्यो अहिले चाडपर्वले केही प्रभाव पारेको छ । छठपछि समायोजनको सबै काम धमाधम अगाडि बढ्छ । शुरुमा प्रदेशको हुन्छ । प्रदेशको समायोजन भएपछि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म जान्छ । एक हप्ता १० दिनभित्र प्रदेश ५ को समायोजन सकिन्छ अनि जिल्ला र स्थानीय तहको टुगों लगाउने काम हुन्छ । यद्यपी समायोजन नभएपनि प्रदेश र जिल्लामा पार्टीका कुनै पनि काम रोकिएको छैन । सबै काम अगाडि बढी रहेको छ ।
कोरोना र चाडपर्वले समायोजनमा समस्या गर्यो भन्ने भन्नुभयो तर पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठकले मंसिर १५ गतेभित्र सबै समायोजन प्रकृया टुगों लगाउने निर्णय गरेको छ, त्यो अवधिभित्र सबै समायोजन हुने सम्भावना कतिको छ ?
–काम भइरहेको छ । समायोजनका कामहरु अगाडि बढीरहेको बेला जसपा नेपालका वरिष्ठ नेताहरु कोरोनाबाट पिडित हुनु भएको छ । जसपाका नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, राजेन्द्र महतो, रेणु यादव, महेन्द्र राय यादव, वृषेशचन्द्र लाल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालगायतका नेताहरु कोरोनाबाट संक्रमित हुनु भएको कारण काममा केही ढिलाई भएको हो । उहाँहरुको रिर्पोर्ट निगेटिभ आउने वित्तिकै पुनः समायोजनका काम अगाडि बढ्नेछ । तर जिम्मेवारी पाएका नेताहरु जो स्वस्थ्य हुनुहुन्छ उहाँहरुले पार्टीको काम गरिरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ यो मंसिर १५ गतेभित्र सातवटै प्रदेशमा समायोजन सम्पन्न हुन्छ । केही जिल्ला तथा स्थानीय तह बाँकी रहन सक्छ तर प्रदेशहरुको समायोजन सम्पन्न हुन्छ ।
मुख्यरुपमा केन्द्र र प्रदेश २ मा समायोजन टुगों लागेको छैन भने देशैंभरि मंसिर १५ गतेभित्र समायोजन सम्पन्न हुने कुरामा तपाई कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
–प्रदेश २ मा अलिकति समस्या छ । त्यसलाई पनि हाम्रो नेताहरुले मिलाई रहनु भएको छ । प्रदेश २ मा पनि समायोजन प्रकृया अगाडि बढ्थ्यो तर अहिले तिहार छठको कारण ढिलाई भइरहेको छ । तर मलाई लाग्छ छठपछि प्रदेश २ को समस्या समाधान गर्दै समायोजनको प्रकृया अगाडि बढ्छ । र चाँडै टुगों लाग्छ ।
प्रदेश २ को समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
–अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा समायोजन गर्न अलि जटिल छ । तर नेताहरु आन्तरिक रुपमा त्यहाँ गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । मंसिर १५ गतेभित्र त्यहाँ पनि टुगों लाग्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । सबभन्दा बलियो संगठन त्यही छ । अधिकाँश ठूला नेताहरु पनि प्रदेश २ कै छन् । स्थानीय तहमा पनि जितेका छन् । त्यसैले अरु प्रदेशभन्दा त्यहाँ अलिअलि समस्या आउनसक्छ तर नेताहरुले त्यसलाई मिलाउने काम गरिरहनु भएको छ ।
प्रदेश, जिल्ला स्थानीय तहको समायोजनसँगै त्यहाँको प्रदेशसभा दललाई पनि समायोजन हुन्छ, ती सबै सम्पन्न भएपछि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन वा हेरफेर हुने सम्भावना कतिको छ कि यही वर्तमान सरकार नै कार्यकाल पूरा गर्नेछ के छ तपाईको बुझाई ?
–पक्कै पनि पार्टी एकीकरण भएको छ । दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ । त्यसले गर्दा मन्त्रीमण्डलमा केही हेरफेर हुने स्वभाविक हो तर नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । केही मन्त्रीलाई हटाउने, केही नयाँलाई राख्ने काम हुन्छ तर मुख्यमन्त्री हटाउँदैन । अहिलेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै पूर्णकार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
त्यसो हो भने त्यहाँको संसदीय दल समायोजन हुँदा पार्टीले लालबाबु राउतलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने भयो होइन ?
–त्यो त स्वभाविक हो नि । जो संसदीय दलका नेता हुन्छन् त्यो नै मुख्यमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार यदि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै रहनु भयो भने उहाँलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्छ ।
यसमा पूर्व राजपाका नेताहरु सहमत हुन्छन् त, राजपा नेपालका नेताहरुले त सरकारका मुख्यमन्त्री फेरिनुपर्छ र पूर्व राजपा नेपालको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भनि माग भइरहेको छ नि ?
–राजपा नेपालले गरेको डिमाण्डलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरुले मिलाई सक्नु भएको छ । मलाई लाग्छ प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री फेर्ने विवाद लगभग अन्त्य नै भएको छ । नेताहरुले आफूमा सहमति गरिसकेका छन् । त्यहाँ समायोजन भएपछि केही मन्त्रीहरुलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ तर मुख्यमन्त्री फेरिदैन ।
प्रदेश ५ मा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम गरेको छ, त्यसमा तपाईकै पार्टीका केही नेताले विरोध गरेका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन् खासमा पार्टीको लाइन के हो ?
–प्रदेश ५ को सरकारले राजधानी र प्रदेशको नामाकारण बारे गरेको निर्णयमा पार्टीले विरोध गरेको छैन केही नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा गरेको होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर पार्टीले त्यसको विरोध गरेको छैन । पूर्णरुपमा समर्थन गरेको छ । पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेश कमिटीसम्मले त्यसको समर्थन गरेको छ । केही नेताले त्यसको विरोध गर्दा हामीले स्पष्टीकरण पनि माग गरेका छौं । त्यहाँको सरकारले जे गरेको छ त्यो पार्टीको माग र चाहना अनुसार भएको हो । हाम्रो सांसदले पनि संसदमा ताली बजाएका छन् । रुपन्देहीका केही नेता तथा सांसदले विरोध गरेका छन् । उहाँहरुको पनि निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचनमा मतको समस्या होला त्यसले गर्दा यस्तो देखिएको हो तर उहाँहरुसँग स्पष्टीकरण पनि मागिएको छ । पहिचान र आधारका पार्टीको जुन माग थियो त्यही अनुसार त्यहाँ भएको हो ।
प्रदेश ५ को राजनीति र प्रदेशको नामाकरण बारे जसपा नेपालको केन्द्रीय तहले नै निर्णय गरेको हो त ?
–जसपा नेपाल बनेपछि निर्णय भएको होइन् । नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीले पहिला नै निर्णय गरेको थियो । र, त्यही अनुसार भएको छ । जसपाले अहिले निर्णय गरेको होइन । तर जसपा नेपालका नेताहरुबाट पनि केन्द्रबाट विरोध भएको छैन ।
जसरी प्रदेश ५ मा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा तपाईहरुले नेकपालाई समर्थन गर्नुभयो त्यसरी नै नेकपाले प्रदेश २ मा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा तपाईहरुको पार्टी जसपा नेपाललाई समर्थन गर्छ त ?
–त्यो त नेकपाले भन्ने कुरा हो । प्रदेश २ मा समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ त्यो कुरा अहिले स्पष्ट भएको छैन । अहिले नेकपाको हालत नै खराब छ । त्यो पार्टी रहन्छ कि रहदैन भन्ने ठेगान छैन । त्यसैले त्यो पार्टीले के गर्छ, गर्दैन त्यसको कुनै कुरा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । प्रदेश २ मा काँग्रेसले जसपा नेपाललाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको छ तर नेकपाको भर छैन ।
अहिलेको वर्तमान सरकार जसलाई नेकपाले नेतृत्व गरेको छ, त्यो सरकारको काम कारवाहीलाई जसपा नेपालले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
–नेपालमा यति मजबुत सरकार र यति फेलियर सरकार कहिले देखिएको थिएन । कोराना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा यो सरकारले के के गर्यो त्यो दुनियाँ समक्ष जगजाहेर छ । हरेक सुविधाको नाममा सरकारले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको छ । जनताले उपचार पाइरहेको छैन तर सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु मालामाल भइरहनु भएको छ । ब्रहमलुट भएको छ । देशले एउटा मजबुत सरकार पाएको छ र यसले केही गर्छ कि भनि हामीले आश गरेका थियौं । हामीलाई त्यतिबेला खुशी लागेको थियो तर अहिले त्यो सरकारको जति नालायक कुनै सरकार थिएन । कोरोनाका कारण देशको अवस्था भयावह हुँदैछ, उपचार नपाएर हालत खराब छ तर सरकार बेखबर छ ।
संघीय सरकार जस्तै प्रदेश २ को सरकार जो जसपा नेपालको नेतृत्वमा छ त्यो सरकारसँग पनि जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो तर त्यो अपेक्षा पुरा नभएको गुनासो भइरहेको छ त्यसमा तपाईको के धारणा छ ?
–प्रदेश २ को कुरा गर्ने हो भने उसले जेजति स्रोत साधन पाएका छन् । त्यसको आधारमा जेजेति काम गरेको छ त्यति काम अरु बाँकी प्रदेशले गरेको छैन । आम जनतालाई किसानलाई, युवालाई, विद्यार्थीलाई, दलितलाई अनुभूत हुने गरि प्रदेश २ सरकारले काम गरेको छ । कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन । अरु प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को अवस्था नराम्रो हुने अड्कल धेरैले गरेका थिए तर अवस्था त्यस्तो छैन । कोरोना महामारी सरकारको नियन्त्रणमै छ ।
तपाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ, तर जसपा नेपालकै कतिपय सांसदहरुले, नेताहरुले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भनि विरोध गर्दै हिड्नु भएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
–अहिले दुईटा पार्टी मिलेर जसपा नेपाल बनेको हो । एकीकरण भएको धेरै समय पनि भएको छैन । दुईटा नदीको पानी एक ठाउँमा मिसिदा केही परसम्म पुगेपछि मात्र एक अर्कामा राम्रोसँग मिसिन्छ र एउटै रंगको पानी बन्छ भने यो त दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको हो । केही दिन त घुलमिल हुन समय लाग्छ । परस्थितिले गर्दा पार्टीले राम्रोसँग काम पनि गर्न पाएन । त्यसले गर्दा केही समस्या देखिएको हो र असन्तुष्टिहरु बाहिर आएको हो तर अब विस्तारै सबै कुरा ठिक हुन्छ ।
तपाई शुरुमा एमाले छाडेर तमलोपा गठन गर्नुभयो । तमलोपा छाडेर महेन्द्र राय यादवसँग पार्टी बनाउनु भयो । त्यसपछि उहाँलाई छाडेर विजय गच्छदारको पार्टीमा जानुभयो । विजय गच्छदारलाई पनि छाडेर नयाँ शक्तिमा जानु भयो । अहिले फेरि सबैजना एकैठाउँमा आउनु भयो तपाईलाई जजसलाई छाडेर जानु भएको थियो अहिले उहाँहरुसँगै आउनुभयो अहिले काम गर्न कतिको सजिलो असजिलो भइरहेको छ ?
–बहुदल पश्चात २०५६ सालमा नेकपा एमालेमा म निर्वाचित भएका थिए । तराई मधेश, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्गको मुद्दामा तत्कालिन एमाले गम्भीर देखिएन । त्यसका लागि हामीले पटक पटक आवाज उठाएका थियौं तर त्यो पार्टी टकस मकस नभएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेका थियौं । पछि त्यहाँ पनि केही कुरामा मतभेद हुँदा हामी अलग भएका थियौं । म जुन मुद्दा र मिसनका साथ राजनीतिमा थिए त्यो जहाँ जहाँ मेल खाँदैन्थ्यो त्यहाँबाट म हिड्थे । अन्त्यमा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा गए । वास्तविक मुद्दा त्यो पार्टीले बाकेको अनुभूती मैले गरे । डा.बाबुराम भट्टराई पहाडका भएपनि उहाँ मधेशी, आदिवासी, जनजातिको मुद्दाप्रति निकै प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । अहिले आएर मधेश केन्द्रीत दलसँग एकीरकण गर्नुभयो । शुरुमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरण गर्दै राजपा नेपालसम्मको पार्टीसँग उहाँले एकीकरण गर्नुभयो त्यसमा मेरो महत्वपूर्ण सहयोग थियो । अहिले विकल्पको रुपमा एउटा पार्टी गठन भएको छ त्यो डा.बाबुराम भट्टराईको योगदान हो । मलाई अहिले काम गर्न निकै सजिलो भएको छ किनभने अहिले जो नेताहरु आउनु भएको छ ती सबै नेतासँग मैले काम गरेको छु त्यसले मलाई यहाँ काम गर्न सजिलो भइरहेको छ । मधेशी, आदिवासी, जनजातिको अधिकार अलग अलग रहेर प्राप्त हुँदैन भने कुरा सबैले रियलाइज गरेर एक गठाउँमा आएका हुन् र अब सबै एउटै मिसनमा काम गर्नेछ । अब लक्ष्य स्पष्ट भएको छ त्यसैले काम गर्न सजिलो भएको छ ।
जसपा नेपाल क्षेत्रीय पार्टी हो राष्ट्रिय पार्टी ?
–जसपा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी हो । यसको संगठन तराईको समथल फाँटदेखि हिमालको टाकुरसम्म रहेको छ । जसपाको झण्डा हिमालसम्म फहराएको पाउनुहुन्छ । त्यसैले यो राष्ट्रिय पार्टी हो । यसमा मधेशी, आदिवसाी, जनजाति उत्पीडनमा परेकाहरु समावेश छन्, पार्टीको हाइकमाण्ड उहाँहरु नै हुनुहुन्छ । मधेशी, आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि संघर्ष भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय पार्टी भन्नुहुन्छ तर संगठन, नेता, मन्त्री, सांसद सबै प्रदेश २ मा नै छन् । तराई मधेशमा नै सबै केन्द्रीत छन् अनि कसरी भयो राष्ट्रिय पार्टी ?
–हो हाम्रो पार्टीको आधार क्षेत्र भनेको मधेश हो तर हिमाल, पहाडमा पनि आफ्नो पकड बनाइरहेको छ । संगठन विस्तार गरिरहेको छ । अगामी चुनावमा जसपा नेपाल मधेश जस्तो पहाड, हिमालमा पनि आफूलाई स्थापित गर्नेछ ।
चुनाव त पहिला पनि लडिसकेको छ नि ?
–हो पहिला पनि चुनाव लडेको हो । त्यो बेला नयाँ नयाँ पार्टी थियो । नयाँ शक्ति पनि नयाँ थियो, संघीय समाजवादी पार्टी पनि पहाड र हिमालका लागि नयाँ थियो । तैपनि चुनावमा भाग लियो । तर निराश गरेन । चुनावले गर्दा एउटा बेस तयार भयो । अहिले हामीले त्यहाँ निकै मेहनत गरिरहेका छौं । तीब्र गतिमा संगठनको विस्तार भइरहेको छ । काँग्रेस र नेकपा छाडेर जसपा नेपालमा प्रवेश गर्नेको लहर नै छ । अगामी चुनावमा एउटा स्थापित पार्टीको रुपमा त्यहाँ पनि आउने विश्वास हामीले लिएका छौं ।